'खानाबाट नेपाललाई विश्वसामु चिनाउने अभियानमा छौं ' : विनोद बराल
बेलायतको चर्चित बम्बे बाइसाइकल टेकवेमा २ दशकअघि नै नेपालीहरुमध्ये सबैभन्दा सिनियर एक्जुकेटिभ सेफ बनिसकेका थिए विनोद बराल । विश्वका ४० ओटा देशमा आफ्नो हस्पिटालिटी सेवा प्रदान गर्ने डु एण्ड को कम्पनीमा एसियन खानाको सम्पूर्ण ब्रान्ड हेर्ने ग्लोबल एक्जुकेटिभ सेफका रुपमा समेत आफुलाई प्रमणित गरिसकेका छन् उनले । बेलायतमा खाद्य व्यवसायमा लागेर ६० हजार भन्दा बढी सेफहरुसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धमा रहेर काम गरिरहेका विनोद बरालसंग पत्रकार जगन कार्कीले गरेको कुराकानी ।
के मा व्यस्त हुनुहुन्छ हिजोआज ?
म त हार्डकोर सेफ मान्छे । खाने कुराको व्यवसायसंगै ५७ वटा रेस्टुरेन्टमा संलग्नता छ । आफ्नै ३ वटा छन् तिनमै व्यस्त हुन्छु । अन्य धेरै रेस्टुरेन्टका साथीहरुबाट मेनु बनाइदिन , कन्सल्टेन्सी गराइदिनको लागि आग्रह आउंछ । मेरो आफ्नै कन्सल्टेन्सी छ स्पाइस पण्डित । त्यसबाट परामर्शको काम गर्छु ।
हाल २ वटा रिटेल कम्पनिको नेपाल फुड्स र गोर्खा वियरका प्रोडक्ट प्रमोसन लगायत आरएनडी ( नयाँ उत्पादन र खोज) काम पनि गरिरहेको हुन्छु । यस अलावा विश्वव्यापी सेफहरुको संस्था ग्लोबल नेपाली सेफ फोरममा पनि रणनीतिक तथा ग्लोवल विभाग हेर्ने गरेको छु ।
धेरै व्यस्तताबीच कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ आफ्नो समय ?
हो, काम धेरै हुन्छन् । समय र स्रोत साधन सिमित हुन्छन् । म तिनीहरुको भरपुर प्रयोगमा विश्वास गर्छु । म बाटोमा हिड्दा पनि काम गरिरहेको हुन्छु । शौचालय बस्दा पनि मेरो दिमागले कामको बारेमा योजना बनाइरहेको हुन्छ । यो भन्दैमा म यति धेरै मेसिन जस्तो काम गर्ने मान्छे हैन । टिम बनाउने र टिम वर्कमा विश्वास गर्ने मान्छे हुँ ।
हाल पेशा र व्यवसाय गर्न विगतको अनुभवले के कति सहयोग पुर्याइरहेको छ ?
ग्लोबल फुड कम्पनीको एक्जुकेटिभ सेफ जस्तो पद सम्हाल्न पाउनु मेरो लागि अवसर र चुनौती दुवै थिए । तर मैले कम्पनीका लगानीकर्ताहरुलाई पनि जायज कुरामा औलो ठड्याएर काम गरेको छु । बेलायातमा सायद सबैभन्दा कम उमेरमा बम्बे बाइसाइकलमा पनि एक्जुकेटिभ सेफ भएर ५ वटाबाट बढाएर २२ वटा शाखा विस्तार गर्न सफल भएका थियौं ।
यति ठुलो लेभलमा काम गर्ने , हेर्ने र अनुभव लिने अवसर पाउनु मेरो लागि ठुलो कुरा थियो । त्यसले मलाई सपना देख्न र त्यसको पछि लाग्न सिकाएको छ ।
हिजो आज ग्लोबल नेपाली सेफ फोरम नाइन भनेर हिड्नुभएको छ , के उद्धेश्य रहेको छ यी संस्थाहरुको ?
आफ्नो पेसा र व्यवसायका लागि त सबैले गर्छन् । अब सहकर्मी र आफ्नो समुदाय र राष्ट्रको लागि पनि केहि योगदान गर्ने उद्धेश्यले विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली सेफहरुको संगठन खोल्ने जमर्को गरेका हौँ । हामी सगरमाथा र बुद्धले मात्र हैन, नेपाली खानेकुरा र परिकारका माध्यमबाट पनि नेपाललाई विश्वमा चिनाउन सकिन्छ भनेर त्यहि अभियानमा लागि परेका छौं । कसरी नेपाली खानेकुरा र रेसिपीहरुलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ र त्योसंगै नेपालको चिनारीलाई विश्वभर फैलाउन सकिन्छ भन्ने नै ग्लोबल नेपाली सेफ फोरमको उद्धेश्य रहेको छ । विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली सेफहरुले कसरी आआफ्नो ठाउंबाट योगदान गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो संकल्प रहेको छ ।
नाइन ( नेप्लिज इनोभेटिभ नेटवर्क फर इन्टरपेनरसिप ) त उद्यमीहरुको संजाल हो । यहाँ जोडिएका व्यापार , व्यवसायी कसरी एक आपसमा सहयोगी बन्न सक्लान , सामुहिक लगानी र नयाँ व्यवसायिक अवसरहरुको खोजको लागि पनि एउटा सामुहिक चिन्तनको थलोको रुपमा हामीले विकास गर्न खोजेका छौं ।
ग्लोबल नेपाली सेफ फोरम कस्तो संस्था हो ? अब के गर्दै हुनुहुन्छ यसबाट ?
यो विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली सेफ हरुको संजाल हो । नेपालमा नेपाल सेफ फोरम यसको नेपाली रुप हो भने बेलायतमा अस्ति भार्खरै हामीले दर्ता गर्यौं ग्लोबल नेपाली सेफ फोरम युके भनेर । यसरी हरेक देशमा यसको संजाल रहेका छन् । ग्लोबल नेपाली सेफ फोरममा हाल विश्वभरका ९३ देशहरुमा फैलिएको संजालमा बाट ७ हजार भन्दा बढी सक्रिय सदस्यहरु रहेका छन् । जसमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपाली खानाका सेफ , खाद्य व्यवसायी, खाद्य विज्ञान सम्बन्धी व्यक्तित्वहरु , खाद्य पत्रकार , रेस्टुरेन्ट व्यवसायी , क्याटरिङ्ग व्यवसायी , खानेकुराको सप्लायर्सहरु तथा किसानहरु छन् ।
नेपाललाई कसरी खाद्य पर्यटनमा विकास गर्ने, अब खानेकुराबाट कसरी पर्यटनलाई अझ परिस्कृत ढंगले प्रबर्धन गर्ने, नेपाली सेफहरुको पेशागत दक्षता कसरी सुधार गर्ने विषयका अलावा पेशाकर्मीहरुको हकहित संरक्षण गर्ने तथा समाज र नेपाली समुदायलाई योगदान गर्ने जस्ता हाम्रा मुख्य प्राथमिकता छन् ।
भावी योजना के कस्ता छन् ?
नेपाली खानेकुरालाई विश्वभर प्रबर्धन गर्दै , खानेकुराका माध्यमबाट देशलाई चिनाउने , खाद्य पर्यटनको प्रमोसन गर्दै भिजिट नेपाल २०२० लाई सफल बनाउन सहयोग गर्ने हाम्रा अहिलेका मुख्य उद्धेश्य छन् ।
अर्को वर्ष टेस्टिंग नेपाल अर्थात् नेपाली खानेकुरासंगै नेपाल चाख्ने भन्ने अभियान बेलायतबाट सुरु गरी विश्वभर पुर्याउने योजनामा छौं । पर्यटन बोर्डको साथ र सहयोग रहेमा अझ धेरै कार्यक्रमहरु साथै लिएर जाने योजनामा छौं ।